MACLUUMAADKA TARANKA EE PUG-ZU DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka ee Pug-Zu Dog iyo Sawiro
Pug / Shih Tzu ey isku dhafan oo isku dhafan
Sadie the Pug-Zu mix mix ey (Pug / Shih Tzu iskutallaabtiisa) 8 bilood jir culeyskiisu yahay 9 1/2 rodol.
Pug-Zu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Baabuur iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Munchi the Pug-Zu (Pug / Shih Tzu iskutallaabta) markay tahay 1 sano jir — hooyadeed waxay ahayd ShihTzu aabbeheedna wuxuu ahaa Pug.
'Kani waa sawirka eeygeyga Murphy oo timahiisa xagaaga xiiranaya. Aabihiis wuxuu ahaa Pug madow, hooyo Shih Tzu. Murphy waxay u baahan tahay qurxin xirfadeed oo ay daadisaa. Isagu waa caqli badan yahay eey yar oo cajiib ah oo jecel inuu ciyaaro.
Munchi the Pug-Zu (Pug / Shih Tzu iskutallaabtiisa) 8 toddobaad jir sidoo kale lagu muujiyey kor koritaan buuxa.
Tyson the Pug-Zu (Pug / Shih Tzu mix) sida eey yar oo jira 3 bilood
Lola brindle Pug-Zu eey 10 toddobaad jir ah— Waxay leedahay shaqsiyad weyn waxayna ku fiican tahay eeyaha iyo carruurta kale. Lola runti waa taqaanaa sida naloo qosliyo !!! Wax weyn ku soo kordhi qoyskeena!
'Pug-Zu eey yar oo ah usbuucyada 7-aad ayuu u macaan yahay.' Waxaa Udiyaaray Midana Nakhshadeeyaha Pups
Lab Pug-Zu eey ah oo leh dhogor nooca Shih Tzu ka dheer
Lab Pug-Zu eey ah oo dhogor gaaban ka ah labkaan iyo cunugga kore ayaa ka yimid isla qashin.
'Sammy waa cunug yar, jecel, caqli badan, eey yar oo cunug ah. Wuxuu jecel yahay inuu daaradda gadaashiisa ku orod , la ciyaar xayawaankiisa oo dhami (sanduuqa uu ku ciyaaro) iyo lafihiisa ruug . '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Pug-Zu
Sawirada Pug-Zu 1
yorkshire iyo shih tzu isku qas
waa maxay eeyga clifford eeyga weyn ee cas
yorkshire terrier iyo shih tzu mix
catahoula eey shabeel isku darka sarkaal labrador
madow tri mini australia puppy puppy